Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada ka imanaya Nur-Sultan kuna socda Bishkek ee Air Astana hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kazakhstan • Wararka Kyrgyzstan • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadyada ka imanaya Nur-Sultan kuna socda Bishkek ee Air Astana hadda.
Dhammaan rakaabka u safraya Kyrgyzstan, oo ay ku jiraan muwaadiniinta Jamhuuriyadda Kyrgyzstan, carruurta da'doodu tahay lix jir iyo rakaabka safarka ah, waa in ay keenaan shahaadada PCR oo leh natiijo xun, iyada oo tijaabada la sameeyay 72 saacadood gudahood ka hor inta aan la dhoofin. Rakaabka si buuxda loo tallaalay ayaa laga dhaafay shuruudan.
Diyaaradda Air Astana ayaa dib u bilaabaysa duullimaadyadii tooska ahaa ee ay ku tagi jirtay caasimadda Kyrgyzstan ee Bishkek oo bilaabanaysa Noofambar 17, 2021.
Air Astana waxay isticmaali doontaa diyaaradda Embraer E190-E2 ee Nur-Sultan, Kazakhstan - Bishkek, Kyrgyzstan.
Nuur-Suldaan – Duullimaadyada Bishkek waxay marka hore shaqayn doonaan laba jeer toddobaadkii maalmaha Arbacada iyo Axadaha.
Air Astana waxay dib u bilaabi doontaa duullimaadyada tooska ah ee Nur-Sultan ilaa caasimadda Kyrgyzstan, Bishkek 17ka Noofambar 2021.
Adeegyada ayaa marka hore lagu shaqayn doonaa iyadoo la isticmaalayo Hawada Astana Embraer Diyaaradda E190-E2 todobaadkiiba laba jeer maalmaha Arbacada iyo Axadaha, oo leh laba jeer oo dheeraad ah Isniinta iyo Jimcaha oo bilaabmaya Disembar.
Adeegyada u dhexeeya Almaty ilaa Bishkek waxay mar hore shaqeeyaan maalin kasta.
Embraer Diyaaradaha E190-E2 waxay leeyihiin qaabeynta qolalka dhaqaalaha iyo heerka dhaqaalaha, iyadoo rakaabka dhaqaalaha qaaliga ah la siinayo hubinta mudnaanta iyo fuulista, kordhinta gunnada shandadleyda, liiska heerka ganacsiga iyo gelitaanka qolka ganacsiga.